Barbell Squats - သူတို့အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ | Bezzia
Susana godoy | 04/05/2021 16:00 | လေ့ကျင့်
သင်ကံကြမ္မာကိုယ်ထည်ရှိပါသလား? အကယ်၍ သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအတွေးအခေါ်ကိုမရွေးချယ်သေးလျှင်၊ သင်သည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိနေသေးသည် ဖြစ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ကီထိုင်များသည်အမြဲတမ်းဆားငန်သောလေ့ကျင့်မှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းသိကြပြီး၊
ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘားကိုအသုံးပြုသူများနှင့်အတူကျန်ရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသင့်သည့်အတိုင်းအဆမဲ့အားသာချက်များကိုလည်းပေးသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူအများဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သောဒေသများဖြစ်ကြသည် ပြီးတော့ဘယ်လိုသူတို့ကိုသင်မှန်အောင်လုပ်သင့်သလဲ ငါတို့စခဲ့တယ်!
1 barbell ကီထိုင်ကဘာအလုပ်လုပ်သလဲ
3 barbell နှင့်အတူ squatting များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်ကဘာလဲ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ကကီထိုင်ဖို့လိုအပ်မှကြွလာသောအခါ, သော ကျနော်တို့တစ်မိနစ်ကနေအလုပ်လုပ်လိမ့်မည် quadriceps ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာအောက်ပိုင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ခြေထောက်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုလူအများကယုံကြည်ကြသည်မှာမှန်ပါသည်။ ဤtoရိယာအပြင်၊ ကျောနှင့်နောက်ကျောတို့လည်းအလွန်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်မှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုမွေ့လျော်နိုင်ရန်ကောင်းသောကွပ်ကဲမှုကိုအမြဲတမ်းထားရမည်။ ဒါကြောင့်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကပေါင်ရဲ့နောက်ဘက်ကြွက်သားတွေ၊
ကီထိုင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အမှားတွေထဲကတစ်ခုကစည်ကိုရှေ့ကိုတင်တာပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံဘားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပခုံးများကို ပို၍ ရှေ့သို့ရွေ့စေပြီးနောက်ကျောက၎င်း၏အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင်မရှိဟုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က arch လုပ်စရာမလိုဘဲဖြောင့်ကျောနှင့်အတူဆင်းသွားရပေမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဆင်းသွားသည့်အခါဒူးထောက်။ ခြေထောက်များ၏အကြံပေးချက်များထက်ကျော်လွန်။ ဒူးထောက်တာနဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့မယူတာတွေ၊ ၎င်းသည်မကြာခဏအမှားအယွင်းများနောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လေ့ကျင့်မှုကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှကိုရှောင်ရမည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အမြဲတမ်းဂရုပြုရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုမှာမျိုးနွယ်စုကိုယ်တိုင်၏ပြtheနာဖြစ်သည်။ တချို့လူတွေကမလုံလောက်ဘူး၊ တချို့ကအရမ်းနိမ့်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကမျှတတဲ့နည်းစနစ်ကိုဆက်ထိန်းထားရမယ်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ကြွက်သားတက်ကြွမှုကိုထိခိုက်နိုင်သဖြင့်သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်အလေးချိန်အလွန်အကျွံမသယ်ဆောင်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်။ ပေါင်ကိုလျှော့ချသည့်အခါသူတို့သည်မြေကြီးနှင့်အပြိုင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အချိုမှုန်များသည် quadriceps နှင့်အခြားသူများကိုမမေ့ဘဲသူတို့၏အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုသင်သိသည်။
barbell နှင့်အတူ squatting များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်ကဘာလဲ
အမှားများကိုတွေ့မြင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုလောင်းပြီးသံသယအမျိုးမျိုးကိုချန်ထားရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်၎င်းသည်မတူညီသောအဆင့်များကို စုစည်း၍ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုလွယ်ကူသော်လည်းအမှန်တကယ်အသုံးဝင်ပါသည်။
ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးလက်နှင့်အတူဘားကိုင်ထားတက်မတ်တပ်ရပ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှန်ကန်စွာရွေ့လျားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းအလေးချိန်ကိုမျှတအောင်ပြုလုပ်ရမည်။
ဒူးနှင့်ခြေနှစ်ဘက်စလုံးသည်ဖွင့်လှစ်။ မရသော်လည်းသက်သောင့်သက်သာရှိသည် နှင့်သဘာဝ, နှစ် ဦး စလုံးဒေသများရှိတင်းမာမှုများကိုရှောင်ရှား။
သင်သည်သင်၏ပခုံးနှင့်အတူရှေ့ဆက် hunching ခြင်းမရှိဘဲ, သင်၏ကျောကိုဖြောင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့်ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒူးထောက်တာတို့မထိသင့်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်။ ဒူးခေါင်းသာမကဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မကွေးသင့်သောခြေဆစ်များကိုသာမကအတင်းဖိအားများကိုရှောင်ရှားရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » လေ့ကျင့် » Barbell ကီထိုင်